Nagu saabsan - Awiner Biotech Co., Ltd.
Awiner Biotech waxaa la aasaasay 2006,oo ku taal woqooyiga Shiinaha-Shijiazhuang, Gobolka Hebei.Magaalada waxay u dhowdahay kabtankeena Beijing, gaadiidku waa ku haboon yahay.Awiner Biotech waxay u heellan tahay cilmi baarista, soo saaridda iyo qaybinta kiimikada cilmiga beeraha. inta badan wax ka qabashada sunta cayayaanka, doogga, fungicides, jaangooyaha koritaanka dhirta iyo sunta cayayaanka ee caafimaadka bulshada.
Illaa iyo hadda, waxaan ku guuleysannay macaamiisha ka kala socda Ciraaq, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Libya, Syria, Turkey, Yemen, Ukraine, Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Chile, Bolivia, Mexico, Brazil, Paraguay, Nigeria, Djibouti, Rwanda , Soomaaliya, Malaysia, Cambodia, Nepal, Myanmar iyo wixii la mid ah.
Wadamadeena kaqeyb galaya bandhigan ayaa kala ah Turkiga, Iran, Pakistan, Nigeria, Russia, Cambodia, Malaysia, Uzbekistan, iwm.
Sahaminta suuqa macaamiisha
Waxaan u aadnaa waddanka macaamiisha si aan u kormeerno suuqa, u falanqeyno una xallino dhibaatooyinka iyaga, fahamno adeegsiga wax soo saarkooda, macaamiisha ayaa sidoo kale na soo booqan doonta
1.One Stop iibsiga Kaaliyaha.
waxaad heli kartaa dhammaan qaababka:
sunta cayayaanka, herbicide, fungicide ....
looma baahna in lala hadlo warshado badan.
2.Kasoo aruurinta dhamaan qiimaha warshadaha kala duwan iyo bixinta macaamiisha qiimaha ugu tartamaya. Si aad u sameyso macaamiisha boqolkiiba kasta
Iskaashiga waqtiga dheer iyo xiriirka wanaagsan ee aan la leenahay warshadaha ayaa naga caawinaya inaan alaab iyo gaarsiin ku helno waqtiga.
4.Waxaad kaheli kartaa tilmaam xirfadeed khabiir ku takhasusay cilmiga beeraha, in kabadan sunta cayayaanka lafteeda.
1.Shirkadu waxay leedahay qaabab kormeer wax soo saarka agrochemical iyo qalab tijaabooyin casri ah: chromatography dareere cadaadis sare leh,
gaaska chromatography, falanqeeye qaybinta qayb walxaha laser, dheelitirka sare ee gorfaynta, falanqeeye qoyaanka, iwm.,
soo-dhoof iyo dibedda, falanqaynta Dufcadda iyo daboolidda ogaanshaha ayaa gaaraya 100%
Waxaan u shaqaaleynaa koox naqshadeyn baako xirfad leh iyo kormeerayaal tayo leh oo khibrad leh si ay ula kulmaan macaamiisha howsha kala duwan iyo
baakadaha baahiyaha leh heerar sare.
Tilmaamayaasha wax soo saarku waxay gaareen ama dhaafeen heerarka FAO iyo dalal kale, waxayna ku guuleysteen heshiis loo dhan yahay
faallooyinka ka imanaya macaamiisha, iyagoo bixinaya dammaanad qaad taageero oo xoog leh oo ku saabsan horumarka macaamiisha.
5, Waxaan aqbalnaa imtixaanka SGS ee alaabooyinka oo dhan!
Kormeerka shixnadaha kahor
1.Hubi haddii ay jiraan waxyeello kartoon ah, daadashada dhalada, iwm dhibaatooyinka markii alaabtu ay soo gaadhay dekedda.
2.Hubi kartoonada tirada si loo hubiyo inaysan jirin kartoono maqan.
3.Chech Haddii alaabooyinka xayeysiinta ah, hadiyadaha, shay-baarka, iwm ee ay macaamiisha dib u dalbadeen ay wada raran yihiin, oo aan la waayin.
4.Hubi haddii ay jiraan wax qoraal ah ama calaamadee ah oo ku dhejisan kartoonka oo aan ku habboonayn in macaamiisha la nadiifiyo ama aan kordhinayn halista baaritaanka.
Kormeerka dhinac saddexaad ee macaamiil cayiman
1.SGS muunad qaadista kormeerka kahor rarka
Ku beddel macaamiisha kormeerka dekedda
Ku saleysan is-baarid
1. Diyaarso taleefanka gacantu ku shaqeeyo ee sarreeya ama kamaradda.
2.Sawiro ka dib abaabulo faahfaahin si aad ugu dirto macaamiisha adoo adeegsanaya emaylka ama qalabka isgaarsiinta.
3.Live mobile APPs ayaa loo isticmaali karaa in loogu yeero macaamiisha fiidiyow isla markaana loogu baahiyo macaamiisha xaalada xamuulka.
Markabku markuu baxo ka dib
1. Waxaan si joogto ah ula socon doonnaa faahfaahinta weelka.
2. Waqti ayaan ku xasuusin doonaa ka hor inta aanu markabku soo gaadhin dekedda
3. Waan la socon doonaa haddii alaabtu waxyeello gaarto ama aysan ku sii jirin.
4. waxaan kuu diyaarin doonnaa dalab kooban oo adiga kugu saabsan, waxaan ka helnaa baaritaankaaga si amar loo dhammeeyo.
1.Kadib amarka la dhammeeyo, waxaan yeelan doonnaa kulan kooban, si loo soo koobo khibrada, dhibaatooyinka la soo dersay iyo shuruudaha gaarka ah ee macaamiisha, si loogu diyaariyo iskaashiga xiga.
Dhamaan naqshadaha shaybaarka iyo shaybaarka waa la hayn doonaa.
3.Waan aad ugu mahadnaqaynaa haddii macaamilku soo bandhigi karo aragtiyo iyo talo soo jeedin ku saabsan amarkan iyo adeeggayaga, tilmaamayo cilladaha, waan horumarin doonnaa marka xigta.
U fiirso iskaashiga soo socda haddii aad ku qanacsan tahay alaabtayada iyo adeegyadayada
Sidee loo xaliyaa hadii dhibaato ka timaado alaabta.
Macaamilku waa inuu keenaa warbixinta tijaabada saddexaad, inta kale waxaan tijaabinaynaa muunadda alaabada. Hadday runti tahay wax ka qaldan tayada sida waxyaabaha ku jira aysan ku filnayn, shirkaddayada ayaa si buuxda mas'uul uga ah.
Haddii ay jirto dhibaato baxsi ah marka uu macaamilku alaabta ka qaado dekedda, shirkaddayada ayaa mas'uul ka ah
Badeecadaha waxaa la keenayaa dekedda muddo 15 maalmood ah, baakaduna way daadatay, waxyeello ayaa soo gaadhay, iwm, shirkaddayada ayaa mas'uul ka ah
Fadlan soo bandhig sawirro iyo muuqaal
(Fadlan ha ka welwelin tayada alaabteenna, Waxaan leenahay xakamaynta tayada adag iyo nidaamka baaritaanka. Dhammaan alaabada waa la tijaabin doonaa ka hor inta aan loo dirin warshad.)